त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेक बारे केही महत्वपूर्ण तथ्य – SunkoshiNews
त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेक बारे केही महत्वपूर्ण तथ्य
हालसालै भारतले आफ्नो देशको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको ब्यापक बिरोध भएको छ । नेपाल, भारत र संसारभरि यसको बिरोध भएको हो । नेपाल सरकारले विज्ञप्ती नै जारी गरेर त्यो मान्य नहुने जनाएको छ । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले नेपालस्थित भारतीय दुतावासअघि प्रदर्शन गरेका छन् । देशैभरि बिरोधमा जुलुस निकालिएको छ । सामाजिक संजालमा पनि व्यापक विरोधहरु देखिएका छन् । दिर्नैपच्छिे भारतबिरोधी माहोल बढिरहेको छ । उता भारतीय बिदेशमन्त्रीले आफ्नो नक्सा सही भएकोले सच्याउने सवालै नभएको बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठक बसेर mिपुलेक समस्याको समाधानका लागि भारतसँग कुटनीतिक पहल गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । नेपालका लगभग सबै राजनीतिक दल, जनता र पक्षहरु भभारतको यस्तो कदमको बिरोधमा देखिएका छन् । सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामाथि विदेशीले गरेको प्रहार आखिर कसले सहन सक्छ र ?
सन् १९६५ मा भारत–चीनबीच नेपालको उत्तरी सिमापारि लिपुलेक क्षेत्रमा भएको लडाईमा भारतले आफ्नो अप्ठ्यारो भूगोलका कारण हार ब्यहोरेको थियो । त्यो बेलादेखि नै नेपालभित्र पर्ने चिनसँग जोडिएको भूभाग लिपुलेक हडप्ने दाउमा भारत रहेको देखिन्छ । त्यसताका राजा महेन्द्रले नेपालभर नयाँ भूमिसुधार ऐन ल्याई नयाँ व्यवस्था लागु गरिरहेका थिए । अथाह जमिन ओगटेर बसेका जमिनदारले भारतमा नेहरुलाई भेटेर नेपालका कम्युनिष्ट राजाले आफ्नो सम्पत्ति खोस्न लागेको गुनासो गरे । त्यसैको फाइदा उठाउदै नेहरुले राजा महेन्द्रलाई बोलाएर राजतन्त्र ढालिदिने धम्की दिदै लिपुलेकसम्मको भूभाग भारतलाई दिन भने । भूमिसुधार मार्फत तराईको जमिन व्यवस्थित गर्ने योजनामा व्यवधान आउने देखि महेन्द्रले लिपुलेकसम्मको भूभाग भारतलदाई छाडिदिएको कथा पनि चर्चा हुने गरेको छ । यदि नेपालका नेताले मोदीसँग लिपुलेकबारे कुरा गर्न गए यही तथ्य देखाएर निरास बनाइदिने केही मानिस बताउछन् ।
आखिर के हो लिपुलेक, यसको अवस्थिति कस्तो छ ? यसको हत्व के हो ? यसबारे हेरौं केही तथ्य –
१) लिपुलेकको भौगालिक अवस्थिति :
२) लिपुलेक सडक मार्गरपदयात्रा मार्ग :
३) पुराना नक्सा दस्तावेजको आधार लिनुपर्छ :
नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनी सुगौली सन्धिमा उल्लिखित नेपालको सार्वभौमिकतामा रहेको तर भारतीय अर्ध–सैनिक दस्ताले ओगटेको नेपालको लिपुलेक समेतको कालापानी–लिम्पियाधुरा अतिक्रमित क्षेत्रको विवादका सम्बन्धमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेष विवरण सहितको तथ्य तथ्याङ्क, विगतमा घटेका राजनीतिक तथा सामाजिक घटना तथा ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज र सन् १८२७र१८५६ समेतका पुराना नक्साको विश्लेषण गरी त्यसैलाई आधार प्रमाणका रुपमा लिनुपर्छ ।
४) लिपुलेक कसको हो ?
सुगौली सन्धिताका बनेको सन् १८२७र१८५६ समेतका पुराना नक्सा दस्तावेजअनुसार लिपुलेक सो¥है आना नेपालको हो । यी नक्साहरु अनुसार लिपुलेक मात्रै होइन यसभन्दा पश्चिममा रहेको कालापानी र लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै हुन आउ‘छ ।
नेपालले सन् १९८० ९संवत् २०३६ साल० देखि बनाएको नक्सा अनुसारलिपुलेक त्रि–देशीय विन्दुमा परेको देखिन्छ ।
५) त्रि–देशीय विन्दु कहाँ पर्छ ?
सन् १९६१–६२ मा नेपाल–चीन सीमांकन गर्दा टिङ्कर भंज्याङ र च्याङ्लारलिपुलेक भंज्याङको बीचसम्म मात्रै सीमारेखा अंकन गरिएको छ । त्यहॉबाट उत्तर लिपुलेक लिम्पियाधुरातर्फ सीमांकन भएको छैन । भारतको अनुपस्थितिका कारण त्रि–देशीय विन्दु स्थापना हुन सकेको थिएन र अझै भएको छैन । ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिको भारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो । सन् १८२७र१८५६ का नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाइ काली नदी भनिएको छ । यी नक्साहरुका आधारमा लिम्पियाधुरालाई भारत–नेपाल–चीनको सीमा जोडिनेरछुट्टिने त्रि–देशीय विन्दु मान्नुपर्छ । तीनै देशको संलग्नतामा विन्दु स्थापना गरी कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान गरिनु पर्छ ।
६) किन चाहियो भारत र चीनलाई लिपुलेक मार्ग ?
–चीनलाई आफ्नो तयारी सरसामान भारतको सवा अर्ब जनता भएको भारतीय बजारमासकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नु छ ।
( सिक्किमको नाथुला मार्ग र हिमाचल प्रदेशको सिप्किला मार्ग समय तथा ढुवानीका हैसियतमा फाइदाजनक छैनन् ।
७) लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे भारतका पदाधिकारीहरुको भनाइ :
– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी: कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिलामा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा कार्यदलबाट प्राविधिक जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्नेछन् ।
९) नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीकोे संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिद्वारा निर्देशन दिइएको, ५ अगस्त २०१४० ।
– तत्कालीन प्रधानमन्त्री आइके गुजराल स् कालापानीका सम्बन्धमा दुबै देशका प्राविधिकहरूद्वारा सीमांकन कार्य भइरहेको छ । यदि सीमांकन प्रतिवेदनले यो नेपाली भूमि हो भन्ने ठह¥याएमा हामी तुरुन्त त्यहाँबाट हट्ने छौं । ९२३ फेबु्ररी १९९७० ।
– तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी स् सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद वार्ताद्वारा छिटै समाधान गर्न नेपाल र भारत सहमत भएका छन् । ९२५ फेबु्ररी २००८० ।
लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे चीनका पदाधिकारीहरुको भनाइस्
– विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाङ कियु स् नेपाल र भारतबीच कालापानी विवाद रहेको हामीलाई जानकारी रहेको छ । द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं । ९बेइजिङमा प्रेस सम्मेलन, १५ नोभेम्बर २००१० ।
– नेपालका लागि तत्कालीन चिनियॉ राजदूत जेङ यु योङ स् साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्दछ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणहरूको बेवास्ता गरिएको थियो । ९२ सेप्टेम्बर १९९९० ।
– चिनियॉ दूतावास, काठमाडौ स् नेपाल र भारतबीच समस्याका रुपमा रहेको कालापानीको विषय मित्रवत ढङ्गले द्विपक्षीय संवादद्वारा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चीनको सदैव मान्यता रहँदै आएको छ । ९१० मे २००५० ।
लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबारे नेपालका पदाधिकारीहरुको भनाइ स्
– तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला स् विवादित कालापानी क्षेत्रको भू–भाग हाम्रो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ, यो विवाद पुराना सबै लिखित प्रमाणहरूको अध्ययन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ र प्रमाणका आधारमा त्यो क्षेत्र नेपालको ठहर हुँदा त्यहाँबाट भारत हट्नुपर्छ ९गोरखापत्र २०५५ जेठ २६० ।
– तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रामशरण महत स् सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि यताका सबैखाले नक्सा, डकुमेन्टका आधारमा पश्चिमी सिमाना लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटीयाङ्दी के हो भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न छलफल भइरहेको छ ९समाचारपत्र दैनिक, २०५६ साउन ११० ।
– पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स् राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि मिचिएको सीमा फिर्ता गर्ने लडाई। अन्तिम समयसम्म लड्नेछौं ९कान्तिपुर दैनिक, २०६६ पुस २८० ।
यी तीनै देशका पदाधिकारीहरु अनुसार लिपुलेक क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै भारत र चीनले किन सम्झौता गर्न पुग्यो रु सायद ती दुबै देशले नेपाललाई बिर्सिए ।
१०) चीन र भारतले लिपुलेक मामिलामा नेपाललाई किन बिर्सिए ?
आर्थिक कारण स् चीनलाई आफ्नो देशमा उत्पादित सामान भारतीय बजारमा सस्तो मोलमा अझ धेरै परिमाणमा बिक्री गर्नुपरेको छ ।
राजनीतिक कारण स् चीनले भारतमा आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढाउनु परेको छ । भारतलाई आफ्नो अधिनमा पार्नसके उसलाई काखी च्यापी विश्व रङ्गमञ्चमा चीनको प्रभुत्व अझ अघि बढ्न सक्ने थियो र विश्वको नम्बर एक राष्ट्र बन्ने लालसा पनि रहेको हुनसक्छ ।
कूटनीतिक कारण स् नेपालको कूटनीतिक शिथिलताका कारण पनि दुवै छिमेकीले बिर्सेको हुनसक्छ ।
११) लिपुलेकबारे भारत–चीनको विवरणः
१२) लिपुलेकबारे नेपालभर हल्लीखल्ली :
यसै प्रसंगमा व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७२ जेठ २६ को बैठकले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकबाट आफूखुशी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउन दुई देशलाई कूटनिितक दबाब दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री, सचिव, सहसचिव, नापी महानिर्देशक समेतलाई सामेल गरिएको त्यस बैठकमा यस पंक्तिकारलाई २० मिनेट सयम दिई लिपुलेकबारे प्रकाश पार्न लगाइएको थियो । यसभन्दा अघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, सहसचिवद्वयलाई यस लेखकले ९बुद्दिनारायण श्रेष्ठ० १५ मिनेट ब्रिफिङ गरेको थियो । साथमा पूर्वराजदूत डा। मोहनप्रसाद लोहनी, पूर्वचिव डा। द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य तथा पूर्वसहसचिव बिहारीकृष्ण श्रेष्ठ पनि थिए ।
विवादास्पद लिपुलेक सीमाका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुखआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा सरकारले विज्ञहरुको समिति बनाउने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो ९नागरिकरकान्तिपुर, २०७२ असार ८ तथा ९० । तर हालसम्म समिति बनेको छैन । अब बन्दैन कि ?
भूकम्पपछि नेपालको पुननिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा नेपाल आएका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले सम्मेलनपछि २०७२ असार ९ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट गर्दा उनले नेपाल, भारत र चीनबीच ‘इकोनोमिक कोरिडोर’ बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । यसबाट तीनै देशलाई फाइदा हुने उनले बताएका थिए । तर चीनको कुन विन्दुबाट सुरु भई कुन विन्दुमा पुगी टुंगिन्छ भन्नेचाहि‘ उनले खुलाएनन् । कतै लिपुलेकलाई नै लक्षित गरिएको त होइन रु यसबारे नेपालको धारणा अहिलेसम्म प्रकाशमा आएको छैन ।
( यसैबीच व्यवस्थापिका संसदको २०७२ असार १६ गते बसेको बैठकले लिपुलेकको यथार्थ के हो रु सरकारले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ रु संसदमार्फत जनताले जान्न पाउने अधिकार छ भन्दै सभामुखले तत्काल धारणा राख्न सरकारलाई रुलिङ गरे । सरकारले लिपुलेकका सम्बन्धमा दुवै छिमेकी मुलुकस‘ग कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो अडान र धारणा राखिसकेको छ र संवाद जारी छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रस‘ग सीमालगायत संवेदनशील विषयको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको दृढ मान्यता रहेको र त्यसैअनुरुप सरकारले काम गरिरहेको छ भनी परराष्ट्रमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराएका छन् ९कान्तिपुर, २०७२ असार १८० । तर देशको सार्वभौमिकता जस्तो मामिलामा अहिलेसम्म ठोस केही भएको छैन । यही विडम्वना रहेको छ हाम्रो देशको ।
१३) अब नेपालले के गर्ने ?
छलफल र अन्तरक्रियाका क्रममा निम्न बु‘दाहरु हो र होइन, के कारणले रु भन्ने बैचारिक खुराक हुन सक्छन् :
५ लिपुलेक क्षेत्र भारत र चीनले व्यापार वृद्धिका लागि उपयोग गर्न हुन्छरहु‘दैन ।
८ राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई मौखिक रुपमा दिएका हुन् भनी भारतले भनेमा नेपालले के भन्ने रु
९ भारतले कालापानी क्षेत्र सय वर्षका लागि लिजमा मागेमा के गर्ने रु
१० भारतले कालापानीमा नेपालको सेना पनि सम्लग्न गरौं भनेमा नेपालले के जवाफ दिने रु
११ भारतले कालापानी क्षेत्र सिलिगुडीदेखि बंगलादेशसम्म छुने भारतीय जमिनस‘ग सट्टापट्टा गरौं भन्ने प्रस्ताव राखे नेपालले के गर्ने रु
१२ लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकबारे अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कुरा उठाए नेपालको भलो हुने छैन भनी भारतले भनेमा नेपालले कस्तो कूटनीति खेल्नुपर्ने रु
यी कुराहरु जे जस्तो भए तापनि सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो । सन्धिताकाका नक्सा दस्तावेजअनुसार लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदी नै काली हो । ती नक्सामा अंकन गरिएको नदीभन्दा पूर्वका लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपालकै ठहरिन्छ । यिनै कुरा जनमानसमा उजागर गर्नुपर्छ । सरकारसमक्ष दबाब सिर्जना गर्नु पर्छ । सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकस‘ग सीमा कूटनीति परिचालन गर्नुपर्छ ।
(विश्वमणि सुवेदीको वालबाट)
प्रकाशित मिति: आइतवार, कार्तिक २४, २०७६
आलमका वकिलको तर्कः मिडियाका कुरा नसुन्नुस् जजसा’प